Dowlada Somalia oo qarash badan ka hesha diwaan gelinta NGO-yada iyo caqabad baahsan oo NGO-yada la kulmaan diiwaan gelinta kadib. - jornalizem
Dowlada Somalia oo qarash badan ka hesha diwaan gelinta NGO-yada iyo caqabad baahsan oo NGO-yada la kulmaan diiwaan gelinta kadib.
Wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay si xad dhaaf ah u diiwaan gelisaa NGO-yada maxaliga ah iyada oo laga qaadayo qarasahad diiwaan gelin ah loona sameynayo shahaado lagu cadeynayo in ay yihiin NGO xalaal ah oo dowladu ogtahay arintooda, loogana baahanyahay in ay dalka iyo dadkaba ugu shaqeyaan si hufan.
Diiwaan gelintaas oo aan aheyn mid dhib badan lagala kulmo hadii uu NGO-gu ogolyahay qarashka diiwaan gelinta ayaa waxaa ka danbeeya murogo uusan markii hore ku tashaneyn NGO-gu taas oo timaada marka ay codsi shaqo weydiistaan hey’ad caalami ah si ay u fuliyaan mashruuc ay dalkana wax ugu qabtaan iyaguna faa’iido ka raadiyaan.
Hadii aan bayaanino murugadaas iyo jaha wareerkaas, sida caadada ah NGO-yada ayaa waxa ay ku shaqeeyaan mashruucyo ay maal gelinayaan hey’ado caalami ah waxa ayna marka hore hey’ada gobaleedyada ama kuwa caalamiga ah ka codsadaan in ay bixiyaan qarashaadka ku baxaya fulinta mashruucyadaas, waxaana marka ay NGO-yada sida xad-dhafka ah loo diiwaan gelinayo ay durbadiba bilaabaan qorshaha ay kula xariirayaan hey’adaha, iyada oo codsigooda marka la arko lagu soo celiyo su’aal gaaban oo ah “ Maheysaa hey’ada aad horay ula soo shaqeysay oo ku taqaan si aan kuu aaminno?”.
NGO-ga maalmaha diiwaan gashan ee doonaya in uu fuliyo mashruuciisi ugu horeeyay ayaa waxaa ku adkaaneysa in uu helo jawaabta su’aasha lasoo weydiiyay maadaama uu curdan yahay uuna aaminsanaa in shahaadada la siiyaay ay u noqon doonto tii dhabaha u xaari laheyd oo irid waliba u furi laheyd.
Arintaas oo ah tan keenta jaha wareerka ayaa waxaa la aaminsanyahay in ay tahay howl ay wax ka ogtahay wasaarada arimaha gudaha maadaama NGO-yadu dekumintiyada ay dirayaan ay kamid tahay Shahaadadii lasiiyay oo ay aheyd in hey’adu ku qanacdo maadaama wasaaaradii ku shaqa laheyd ay fasax ka heestaan oo aysan u baahneyn recommendation dheeraad ah.
Hadii wasaarada arimaha guduhu aysan waxba kala socdan qorshahaasi, waxa ay aheyd in ay hey’adaha caalamiga ah kula taliso in ay la shaqeeyaan NGO-yada maxaliga ah ee heesta shahaadada wasaarada si loo dar dar geliyo howlha soo celinta bilicda dalka, gaar ahaan caasimada Soomaaliya.
Hadaba waxaa soo baxaya su’aalo fara badan oo lees weydiinayo kuwaas oo ay kamid tahay: “Wasarada arimaha guduhu mawaxa ay NOG-yada u siisay Ruqsada in lacagta uun uga gurato misa in ay ku shaqeeyaan?”, Su’aasha labaad ayaa waxa ay tahay, “Ma wasaarada ayaan awood u laheyn in hey’adaha caalamiga ah u sheegto in NGO kasta ee shahaadadaasi heesta lala shaqeyn karo?”
Su’aasha kale ee iyana la isweydiinayo ayaa waxa ay tahay, “ma arin qarsoon ayaa jirta oo hey’adaha iyo Wasarada ka dhexeeya ee ah n lajaha wareeriyo NGO-yada?”
Waxaa iyana soo baxeysa, “Wasaaradu hadii aysan NGO-yada in ay shaqo galaan u awoodin maxey lacagta badan uga qaadataa maa soo sarto go’aan muujinaya in la joojiyay diiwaan gelintooda?”